Posted by ကို Tranquillus | သြဂုတ်လ 12, 2021 | web ပေါ်မှာ
Vous êtes titulaire d’un compte formation et vous souhaitez vous former aux métiers du numérique ? Avec votre compte personnel de formation (CPF), vous avez désormais la possibilité d’obtenir un financement de l’État. Dans le cadre du plan ပြင်သစ်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်CPF အတွက်အပိုအခွင့်အရေးအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။ အချက်နှင့်အတူ ဝန်ဆောင်မှု -Public.fr.
ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ရေးအကောင့်: ဒစ်ဂျစ်တယ်သင်တန်းအတွက်ငွေကြေးအကူအညီ အောက်တိုဘာ 15, 2021Tranquillus
လွန်ခဲ့သောကာကွယ်ဆေးထိုးရန် (သို့) အချို့သောအသက်မွေး ၀ မ်းကြောင်းအတွက်ကျန်းမာရေးလက်မှတ်ရှိရန်တာဝန်ရှိသည်
အောက်ပါFree Excel: ဆဲလ်တစ်ခုအားတွက်ချက်မှုတစ်ခုတွင်အဘယ်ကြောင့်အေးခဲအောင်လုပ်ရမည်နည်း။
လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေး- မတ်လ 31 ရက်၊ 2022 တွင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲ။